Top 5 Best Cities ukuchitha Christmas | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 5 Best Cities ukuchitha Christmas
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 30/01/2021)
2018 phantse kwi ekupheleni, nto leyo ithetha ukuba iKrismesi ikufuphi! Abantu nangoku abangafumani ilungele kuyo, kodwa ukuba abahambi, lixesha eliphezulu ukucwangcisa i uhambo. Ukuba ukhangela le isixeko ilungelo ukuchitha leKrismesi, siyifumene wawuzegquma.
Eli nqaku liza kunika uluhlu oluneenkcukacha izixeko kakhulu ukuchitha leKrismesi. Yintoni egqithisile, siza kukuxelela ngazo zonke izinto umdla onokuzenza khona, kodwa okubaluleke, indlela ukuya kwezi zixeko ngololiwe.
Amsterdam has indawo ekhethekileyo abakolu luhlu njengoko kukho umcimbi kuqala kwasekuqaleni. Ukususela ngo November, abantu ukusuka Amsterdam begin ukuba celebrate Christmas kwaye zonke ezinye ebusika izenzakalo.
the Museum Square embindini isixeko siguqule kwilali Christmas a fairytale. Apha ungenza kunandipha enye kwiimarike best Christmas eYurophu. Ngaphezu uyakufanelekela Amsterdam njengomnye wemizi kakhulu ukuchitha iKrismesi.
Amsterdam eyaziwa kakuhle ukuba izakhiwo zawo langa esemfuleni amaninzi, kodwa umzi inikeza okuninzi. Uyakwazi ukonwabela ice skating, Ferris ekhwela ivili, ukutya fantastic kunye neentlobo yeziselo, kwakunye nokunye okuninzi.
Unako kwakhona enjoy iKrismesi nasemva kokuba eziphelweni ngosuku. Ngosuku olulandelayo emva kweKrismesi, abantu Amsterdam ababhiyozela Usulu lwenkongo.
Ungatyelela Amsterdam ngololiwe ukusuka phantse naphi eYurophu. Isikhululo central lebhokisi Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, kunye nezinye ezininzi. Kukho imigca rhoqo abaninzi kubo kunye nabanye abaninzi imizi e Netherlands. Ngoko ke ukuba ufuna kunye koololiwe yaseYurophu unako abaliqela Cities Best Ukuhlela leKrismesi 1 uhambo.
Best Cities Ukuhlela iKrismesi, Pick abanda – Stockholm, Swiden
Oku kungenzeka ebandayo, kodwa uya kuzidla uze sisakuthanda ukuba olukhethiweyo ukuba Stockholm for Christmas. Sweden ke ilizwe ukuba ebudeni holide zobusika kuba balwa ukudlula ngokwabo.
Isixeko ngokwayo kakuhle ezihonjiswe ngexesha leeholide, yaye inikeza into zombini mihla zemveli. It is a ukhetho phezulu njengomnye wemizi okusemandleni ukuze iKrismesi.
Kukho izibane yonke kunye neemarike iKrismesi ezitalatweni kunye ukutya eshushu kunye neziselo. Uya Uyahlanya ukuba uzame The nesinamon kubhakwa okumnandi okanye gingerbreads kwenye kwiivenkile ezininzi esi sixeko! Sweden linganiki lukhulu ngendlela ukhetho ezahlukeneyo ukutya, kodwa uya kuzidla uze ufuna nto enye into xa uzama Bun nesinamon kunye ikomityi eshushu yekofu.
Ngaphezu, uza kufumana ithuba lokuba kutyelela enye yeedolophu ezindala kakhulu intle eYurophu. Emva koko ke ume wamangaliswa ujonge misele ezahlukeneyo ubugocigoci, esemfuleni, kunye nokuninzi.
Ungafumana ku Stockholm ngololiwe ukusuka kwiindawo ezininzi eYurophu njengoko Sweden ixhulumane nge Copenhagen. Ngaphezu, uya ufuna ukuthatha aqeqeshe abanye kwiindawo ezisemantla leli lizwe. Nantso ke apho Lights Northern zezona ankrelekrele amahle kakhulu.
Budapest, Ikomkhulu laseHungary kunye nesona sixeko sihle, yenye yeendawo kakhulu ukuchitha iKrismesi kuyo yezizathu ezininzi. Isixeko silele kuMlambo iDanube kwaye sinika ezinye ekhwela umkhumbi okumangalisayo. Ungabona phantse zonke izakhiwo zembali omlambo.
Ngaphezu, kuya kufuneka ukubona Buda mihle Castle kunye nePalamente Building. Ke zona izinto onokuzenza ebusika, kukho ezininzi. Ukusuka zikhwele streetcars ukuba iZiko loFikelelo olwenziwe Lula kwi Budapest Park ice salo, kusoloko Zininzi izinto ukwenza apha. kwakhona, musa ukulibala ukutyelela imarike iKrismesi kwi Vorosmarty Square kunye mboniso iKrismesi kule Basilica.
Isikhululo kaloliwe engundoqo esikhangeleka ngathi Kwathi ngqo ukusuka kwincwadi Harry Potter iphakathi nendawo. Idibanisa Budapest kuninzi kwizixeko ezinkulu eYurophu yaye ngaphezulu. izitishi ezimbini ezongezelelweyo kwakhona ezininzi imigca kaloliwe, ekwenziweni zokuhamba ukuya nokubuya Budapest kamnandi.
Best Cities Ukuhlela iKrismesi, Pick unique – eStrasbourg, Fransi
EStrasbourg ayikho kuphela ukhetho kakhulu ukuchitha iKrismesi, kodwa kwakhona capital eKrismesi. Awukwazi miss ukutyelela kule dolophu langa e Christmas.
eStrasbourg luyagwagwisa Iimarike nyaka-400 ubudala Christmas, echaza ngokucacileyo ukubaluleka kweKrismesi kulo mzi.
Ngaphezu, kukho ukubaxa okuninzi nezinye zinto ukuze ubone uze wenze. Ungandwendwela i eStrasbourg Cathedral onobungangamsha okanye tell 18th ngekhulu Palais Rohan. Uyakwazi Kwakhona qaphela wonder umthi omkhulu weKrismesi kufuphi Sharing Village, okanye ukuzulazula kumbindi wesixeko. Inye kuphela into esiqiniseke ngayo kukuba akunakuze ube nesithukuthezi kulo mzi omlingo.
EStrasbourg ise kumbindi Western Europe, kumda kunye Germany. indawo yayo yenza ukuba ukudibanisa kuninzi imizi eYurophu. Oko kuthetha ukuba ekufumaneni uloliwe ukuya esixekweni kuya kuba lula kakhulu.
Cities Best Ukuhlela iKrismesi kwaye ayindawo engcono yokuphila – Geneva, Swizalend
Enye indawo best eYurophu, ukuba ihlabathi, ebusika, i Switzerland. Yiloo nto Geneva, esinye sezixeko kunazo e Switzerland, kuba ngokuqinisekileyo phakathi kwezixeko okusemandleni ukuze iKrismesi.
Esi sixeko isekelwe phezu kweendonga of Lake Geneva, kwaye ngexa lokuvuna, lonke echibini i elivuthayo. Amawaka izibane kukhanye evela iivenkile ezikufuphi, ezibayeni, izakhiwo zoluntu, kunye nezinto nokuhombisa Christmas.
Esinye sezizathu ke wathatha eGeneva for Best Cities ukuba Chithani blog iKrismesi kukuba abathandi Ukutya kufuneka kwakhona nemihlali njengoko pre esi sixeko-market Christmas inikeza ukutya kulo lonke ihlabathi. Yintoni egqithisile, ungakwazi ukuya kuthenga Ukuhamba e Street, yaye emva koko sityelele ezinye amahlandinyuka eziphawuleka kakhulu. ezi zibandakanya i Palace weZizwe eziManyeneyo, St Pierre Cathedral, Jet Water, kunye nokuninzi.
Kukho oololiwe rhoqo kwezinye izixeko e Switzerland ezifana Bern kunye Zurich ezinokuthatha ukuba eGeneva. kunjalo, kukho kwakhona eninzi koololiwe ukuya nokubuya Italy, Fransi , Jemani , kunye nokuninzi. Iingoma baye emizini ezifana Lausanne, Paris, Venice, milan, Intle, Verona, kunye nezinye ezininzi. Ngaphezu, isikhululo kaloliwe engundlunkulu ngawo kanye kumbindi wesixeko.
ILyon ukuya eGeneva ngoLoliwe
Ngoko khona unayo kuyo, uluhlu olupheleleyo izixeko engcono ukuchitha iKrismesi. Ukuba ufuna ingcaciso engaphezulu malunga Ukuqeqesha Travelling ukuya kula mizi, uzive ukhululekile ukuba Qhagamshelana Gcina A Isitimela nangaliphi ixesha.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#Hangari #traveleurope europetravel sweden amacebiso trainjourney Tranride oololiwe traintip tips uloliwe train Travel tips zokuhamba train uhambo ngololiwe Travel travelamsterdam travelfrance indawo yokuhamba
Modern Art Galleries eYurophu Apho uzifune
Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe